FAKAFAKA: mieloelo hatrany ny « zanahary kely » ! | NewsMada
FAKAFAKA: mieloelo hatrany ny « zanahary kely » !
Par Taratra sur 23/10/2018
Lesoka ny any amin’ny fanabeazana. Tsy lesoka fe lesoka fotsiny fa tena efa hady lalina saro-totofana mihitsy ! Raha mbola mpitondra saribakolim-bazaha no mitantana ity firenena ity, tsy misy azo antenaina loatra ny hoavy mamiratra ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy. Iray amin’ireo mila handraisana fanapahan-kevitra hentitra ny tontolon’ny fampianarana. Teny malagasy madiorano no aoka ho teny hoenti-mampianatra sy manabe ny taranaka malagasy. Manana ny fiteny malagasy ny Malagasy ka nahoana no fitenin-drazam-bazaha no hanazavana lesona ho an’ny taranaka malagasy ? Sady fanaovana tsinontsinona ny Malagasy izany no sanatria fametrahana ny « sasany » sy ny momba azy manontolo (fiteny, fomba, fihetsika, sns) ho « zanahary kely » ka tsy maintsy atao an-doloha!
Rehefa tsy mifanaraka amin’ny lamina voajanahary io teny ibeazana io, tsy maintsy misy fiantraikany any amin’ny tsirairay sy ny fiarahamonina ary ny firenena mihitsy. Firy amin’ny zaza sy ny ankizy ary ny tanora malagasy miaina amin’izao vaninandro izao moa ny mihevi-tena fa vazaha vokatr’io fitenenana teny vahiny io ?
… Vokany, robain’ny « sasany » ny haren’i Madagasikara satria ny tompony aza, efa mihevi-tena ho vazaha. Izany hoe, efa zary tompony mangataka ny atiny… Fa raha io fampianarana sy fanabeazana io no hatao amin’ny fiteny malagasy ny fanazavana, hisy zavatra goavana be hiova eto !